Guddoonka labada Aqalka ee Baarlamaanka oo saxiixay Hindise-Sharciyeedka Xuquuqda Siyaasiyiinta Dowladda – Kalfadhi
Guddoonka labada Aqalka ee Baarlamaanka oo saxiixay Hindise-Sharciyeedka Xuquuqda Siyaasiyiinta Dowladda
in Baarlamaanka, Hindise-Sharciyeedyo, Warar
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Guddoomiyaha Aqalka Sare Mudane Cabdi Xaashi Cabdullahi, ayaa maanta saxiixay Hindise-Sharciyeedka Xuquuqda Siyaasiyiinta Dowladda.
Hindise-Sharciyeedka ayaa kasoo gudbay Golaha Shacabka 5-tii bisha 12-aad ee sannadkii 2018-kii, waxaana uu soo gaaray Aqalka Sare 29-kii bishii 12-aad ee sannadkii 2019, sida waafaqsan qodobka 44-aad (1) ee xeerka Hoosaadka Aqalka Sare.
Sharcigan waxaa uu ka hadlayaa xuquuda siyaasiyiinta dowladda, sida Madaxweynaha, Ra’iisul wasaaraha, ku-xigeenka, Guddoonka Golaha Shacabka iyo ku-xigeennadooda, xildhibaannada, wasiiradda iyo siyaasiyiinta kale ee dowladda.
Hindise-Sharciyeedka Xuquuqda Siyaasiyiinta, ayaa dhigaya in waajibaadka saaran siyaasiga hela Xuquuqda Siyaasiga ay kamid yihiin, in uu howlgallo mar kasta oo dalka u baahdo, haddii aan xeer kale u diidin sida xeerka howlgabka iwm.
“Wax shuruud ah kuma xiri karo shaqaddii dowladda ama dadweynuhu u arkaan inuu qabto, iyadoo dowladda xiligaa jirta laga rabo inay fududeyso tasiilaadka howlfulineed ee siyaasiga uga baahanayo inuu guto shaqada loo wakiishay”.
“Waxay dowladda u wakiilan kartaa shaqo ka baxay dalka, iyadoo la siinayo mid uun xuquuqaha gunno ee siyaasiga (Liil-Tirka) ama Gunnada/Mushaharka shaqada uu markaas qabanayo”.
Guddiga Doorashooyinka oo kulan is-xog wareysi ah la qaatay qaar ka mid ah Xisbiyada Dalka
Madasha Xisbiyada Siyaasadda iyo Xisbiga Wadajir oo si isku-mid ah usoo dhoweeyay shirka Dhuusamareeb